Ukuvuza okutsha okunxulumene neXiaomi Mi6 | Iindaba zeGajethi
Ngaphandle kwento yokuba indlela yentengiso apho abemi baseTshayina babeqhele khona itshintshile, ishiya iivenkile zefowuni kunye nokubheja kwiitheminali ezinikezelwa ngabaqhubi, kunye nomonakalo obangelwe yinkampani yaseTshayina iXiaomi, ifemi iyaqhubeka nokusebenza nzima ukubuyisa inxenye yentengiso ephosileyo okoko ukhuphiswano lweli lizwe kunye neenkampani ezintsha lube lukhulu. Enye yeentshukumo ezitsala umdla omkhulu kulo mbandela yayikukumiselwa kweXiaomi Mi Mix, isiphelo sendlela esothusa abahlali nabantu abangabaziyo, ngaphandle kwento yokuba ukuhanjiswa okubhengeziweyo akunanto yakwenza nemodeli yokugqibela ebekiweyo.
Indawo elandelayo eya kuthi ifike kwimarike yenkampani yaseTshayina iya kuba yiXiaomi Mi6, isiphelo sendlela apho inani elikhulu leenkcukacha zisandula ukuvuza. Esi siginali, ethi Iya kuba sisiphelo senkampani de kufike umntu oza kungena ezihlangwini zeXiaomi Mi MixIya kusinika isikrini se-intshi eyi-5,2, kodwa kwakhona, iya kufika kwimarike ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo. Eyokuqala iya kusinika isisombululo esipheleleyo se-HD (1.920, 1.080) ngelixa lesibini liza kukhetha isisombululo se-QHD (2.560 x 1.400).
Kwakhona iiseramikhi ziya kuba yinxalenye yesiseko kunye nokusebenza okuphezulu. Esi siphelo siza kubonelela nge-64 GB yogcino olusisiseko kunye ne-6 GB ye-RAM. Imodeli yexabiso eliphantsi, enesisombululo esipheleleyo se-HD, iya kusinika i-32 GB yokugcina kunye ne-4 GB ye-RAM. Ungathini ukuba izokwabelana iya kuba yintsimbi yekhamera ngaphambili nangasemva, i-8 kunye ne-12 mpx ngokwahlukeneyo, zombini zenziwe yinkampani yaseJapan i-Sony. Okwangoku asiyazi imihla yenkcazo-ntetho yayo, kodwa ngekhe simangaliswe ukuba inkampani yaseTshayina iyenze yahambelana nokuqaliswa kweGPS S8, ukufumana ingqwalaselo yemidiya efanayo naleyo iflegi ye-Samsung elandelayo eza kuyifumana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ukuvuza okutsha okunxulumene neXiaomi Mi6